Taliye Ku Xigeenkii Booliska Puntland Oo La Dhaawacay. – Bogga Calamada.com
Taliye Ku Xigeenkii Booliska Puntland Oo La Dhaawacay.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Garoowe ee Gobalka Nugaal ayaa ku waramaya in israsaaseyn xooggan oo u dhaxeesay Maleeshiyaad kawada tirsan Maamulka isku magacaabay Puntland ay ka dhacday deegaan duleedka kaga beegan Magaalada Garoowe oo xarun u ah Maamulkaasi .
Israsaaseyntaan ayaa timid kadib markii Ciidamo uu watay Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Maamulkaasi Ninka Lagu magacaabo Bille Faarax Cali ay tacshiirad Rasaas ah isweydaarsadeyn Maleeshiyaad kale oo ka tirsan isla Maamulka Ashahaada ladirirka Puntland, kuwaasi ku sugnaa deegaan lagu magacaabo “Buura- wadal” oo u dhaxeeysa deegaanka “Tukaraq”, iyo Magaalada Garoowe .
Wararka ayaa tibaaxaya in Israsaaseyntaasi ay ka dhalatay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh taas oo soo kala gaartay Maleeshiyaadkii dagaallamay, waxaana dadka dhaawacmay ka mid ahaa Taliye ku xigeen Ciidanka Booliska maamulka isku magacaabay Puntland, kaasi oo dhaawaciisa la geeyay Cisbitaalka Magaalada Garoowe.
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta keentay Dagaalkaan, iyadoona Wararka qaar ay sheegayaan in Dagaalka uu yimid kadib markii Maleeshiyaadka ku sugaanaa deegaanka Buulara-wadal ay ka shakiyeen Ciidamada uu watay Taliyaha ay dhaaweceen sidaasna ay rasaasta ugu bilaabeen.
Deegaanka Tukaraq oo qiyaastii 90 km u jira Magaalada Garoowe ayaa waxaa in mudda ah ka taagan xiisad colaadeed oo u dhexeysa maamullada isku kala magacaabay Somaliland io Puntland kuwaas oo isku haysta gacan ku haynta deegkaasi.
Taliye kuxigeenkan hadda dhaawacmay ayaa kal hore sidaas oo kale uu dhaawac kasoo gaaray israsaasayn dhexmartay Taliyihii hore ee ciidamada Booliska Puntland Jen, Ereg iyo gudoomiyaha gobalka Nugaal Col, Faraweyne kadib markii uu muran dhexmaray xilli ay shir kuwada jireen.
Dagaallada dhexmara maleeshiyaatka ayaa joogto ka ah deegaannada ay ka jiraan maamullada dabadhilifyada ah ee ay dowladaha shisheeye ka dhiseen qaybo kamid ah gobollada dalka Soomaaliya.